Frank Gardner: Wariye BBC ka tirsan oo diyaarad looga dhex tagay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Frank Gardner: Wariye BBC ka tirsan oo diyaarad looga dhex tagay
Frank Gardner: Wariye BBC ka tirsan oo diyaarad looga dhex tagay,
Weriyaha BBC-da ee arrimaha ammaanka Frank Gardner ayaa isaga oo careysan bartiisa Twitter-ka so dhigay qoraal uu ku sheegay in looga dhex tagay diyaarad gudaha diyaaradaha caalamiga ah ee Heathrow ee ku yaalla London.
Frank oo lugaha naafo ka ah ayaa sheegay in shaqaalaha diyaaradda ay ku guul dareysteen inay u keenaan baaskiilka ay adeegsadaan dadka naafada ah si uu diyaaradda uga dego.
Waa dhibaato ay la kulmeen dad badan oo naafa ah, markaa maxaa sabab u aha arrintani?
“Mar kale ayay arrintan dhacday. Waxaan ku dhex go’doonsanahay diyaarad faaruq ah gudaha garoonka Heathrow muddo dheer ka dib oo ay dadkii rakaabka ahaa diyaaradda ka dageen,” ayuu yiri Frank isagoo xanaaqsan xilli habeenkii Axadda aheyd uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha UK xilli uu kasoo laabtay Estonia iyo Helsinki.
Wuxuu hadalkiisa sii raaciyay “Ma jiro qof ka tirsan shaqaalaha garoonka oo ii soo qaaday baaskiileyga si aan u dego, aad ayaan u niyad jabsanahay.”
Waxaa qoraalkan uu soo dhigay barta Twitterka sii baahiyay dad badan oo siyaabo kala duwan uga hadlay sida ay uga argagaxeen waxa ku dhacay weriyaha.
Dad badan oo naafa oo adeegsada baaskiilka ayaa BBC u sheegay in dhibaato noocan ay la kulmeen.
Ben Furner waxa uu la kulmay wax la mid ah dhacdadan toddobaadyo ka hor gudaha madaarka Ingiriiska. Waxaa looga tagay gudaha diyaaradda iyadoo loo raadinayay qalabka ka caawiya socodka.
Waxaana markii loo keenay baaskiilka loogu talagalay dadka naafada ah inkasta uu diiday in uu adeegsado maadama uu codsaday in loo keeno qalabka socodka ka caawinayay ee uu sitay, waxaana markii xaaladda faraha lasoo galay mas’uuliyiinta diyaaradda oo amar ku bixiyay in la siiyo qalabkiisa si uu diyaaradda uga dego ninkan lagu magacaabo Ben Furner.
Sida laga soo xigtay mas’uuliyiinta duulista hawada ee UK, mas’uuliyadda waxay saaran tahay maamulka garoonka si ay u ilaaliyaan badaqabka rakaabka, waxaa taas kamid ah in qofkii rakaabka ahaa loo keeno baskiilkiisa si asagoo nabad ah uu usoo dego.
Maamulka gegida dayuuradaha ee Heathrow wuxuu doonayay in dhammaan rakaabka ay galaan “safar aan kala go’ ‘lahayn” tallaabadaas oo “Niyad jab” ku ahayd weriye Frank. “Raalli gelin ayaan ka bixinay arrintan” ayuu yiri maamulka isaga oo sabab uga dhigay dhibaatada jahwareeka iyo saameynta ka dhalatay cudurka Covid-19.
“Maadaama garoonka lagu sameynayo dib u dhis kadib saameynta ka dhalatay cudurka, dhammaan hay’adaha ka hawlgala garoonka waxay sare u qaadayaan adeegyada si howsheena ay si caadi ah ugu soo laabato”
Previous articleUruradi Way Furan Yihiin Siduu Madaxwaynuhu Sheegay,waa Inuu Xisbigeenu Ku Sobaxaa”Aamina Waris
Next articleMadaxwayne Xarshin HanaTagine Madaxwaynha Kugu Xiga Marka Ladorto “Samale Oo Mucaaridka La Hadlay